China Carton Flow Racking orinasa sy mpanamboatra |Ampahafantaro
Carton fikorianan'ny racking, fitaovana amin'ny kely mitongilana-roller, mamela baoritra mikoriana avy amin'ny ambony loading lafiny ho ambany retrieval lafiny.Mitsitsy toerana fanatobiana entana izy io amin'ny fanafoanana ny lalan-dàlana ary mampitombo ny hafainganam-pandeha sy ny vokatra.
Karazana racking: Carton mikoriana racking
Habe: namboarina Loading: 100-1000kg / ambaratonga
dity 50mm Placeniaviany Nanjing, Sina
Fampiharana: toeram-pivarotana lehibe, pharmaceutique, simika ary indostrian'ny elektronika
Ny fitsipiky ny fiasan'ny baoritra mikoriana racking dia mitovy amin'nyhery misintonaracking, ny tena maha samy hafa dia izanyhery misintonaNy racking dia natao ho an'ny pallet mihetsika, raha ny baoritra mikoriana dia natao ho an'ny baoritra na boaty / bin mihetsika.CArton dia mikoriana avy amin'ny lafiny iray, ary alaina avy amin'ny ilany.
◆Accessory: Miaraka amin'ny toby fitehirizana eo anoloan'ny racking, dia mora kokoa ho an'ny mpandraharaha ny famoahana baoritra na boaty/biby.
◆Accessory: Miaraka amin'ny fantsona boribory fisarahana eo anelanelan'ny-roller, ny boaty tsirairay amin'ny lalana marindrano dia azo zaraina mba hisorohana ny fifandonana.Tena ilaina amin'ny fitahirizana bateria izany.
② FIFO karazana racking
Ity rafitra ity dia mampiasa fitambaran-dalana sy kodiarana.Ny lalamby dia miorina amin'ny fitongilanana kely, avo kokoa amin'ny sisiny izay mikoriana, ka ny baoritra dia mandroso rehefa ampidirina ao amin'ny rafitra.Ny baoritra misy vokatra mitovy dia ampidirina ao ambadiky ny iray hafa.Mikoriana mandroso eo ambanin'ny herin'ny maizina ilay baoritra mba hamoronana fihodinana henjana 'First In, First Out'.
③Adaptability amin'ny racking hafa
Carton Flow racking dia azo ampidirina amin'ny karazana racking hafa mba hamoronana fomba fitahirizana bebe kokoa.Ohatra, baoritra mikoriana racking + mifidy pallet racking;baoritra mikoriana racking + mezzanine.
baoritra mikoriana mikoriana + mifidy pallet racking
baoritra mikoriana racking + mezzanine
Ny rafitra fitahirizana mavitrika Carton Flow dia manome tombony maro amin'ny fizotry ny fanangonana baiko.
• Mampihena ny fandehanana an-tongotra
• Mitsitsy toerana amin'ny fanafoanana ny lalan-kely
• Fanatsarana ny hafainganam-pandeha sy ny vokatra
teo aloha: Cantilever Racking
Manaraka: Drive amin'ny Racking
Shuttle amin'ny lalana efatra, Asrs Storage, Carton Live, Conveyor, Baby Shuttle, Drive amin'ny Racking,